Yey maslaxad ugu jirtaa xiisadda ka dhex taagan dowladaha Imaaradka iyo Qatar? - Caasimada Online
Home Dunida Yey maslaxad ugu jirtaa xiisadda ka dhex taagan dowladaha Imaaradka iyo Qatar?
Yey maslaxad ugu jirtaa xiisadda ka dhex taagan dowladaha Imaaradka iyo Qatar?
Muqdisho (Caasimada Online) – Xiisadda u dhexaysa Imaaraadka iyo Qatar ayaa ayaamahan danbe cirka isku shareertay ka dib markii labada dhinac ay isku maandhaafeen duullimaadyo diyaarado Milateri. Arrintan ayaa khatar gelinaysa danaha istaraatiijiga ah ee Maraykanku ka leeyahay Khaliijka, waxana dhici karta in ay Iran fursaddan ka faa’idaysato.
Isha ugu muhiimsan ee xogta: Reuters World & Goobjoog News